Vista's Colorful Planet: သောင်းပြောင်းထွေလာ အစားအစာ
Japanese set Meals လေးနဲ့French fries လေးတော့ကြိုက်တယ် ရှလွတ်
ဗစ်စ်ရေ...စားစရာတွေ မကြည့်ချင်လောက်အောင်ကို ဗိုက်တအားတင်းနေတုန်း...
လင့်ခ်ယူထားတာ ခုမှ လာပြောတာ...
Comment ပေးမယ်ပေးမယ်နဲ့ ကပ်ကျော်နေတယ်။ ကောင်းတယ် အစားအသောက်တွေ ။ အဲဒီက သူငယ်ချင်းတွေလဲ ဒီလိုစားလို့ရတယ်ဆိုတာ နမူနာယူရတာပေါ့။ ဒါနဲ့အဲဒါ ဘယ်မှာလဲ? ဘာစာမှမရေးပုံထောက်တော့ ဒိုင်ရှိုလေးထွက်စားတာ ဖြစ်ရမယ်
ရောင်စုံဖြာဂြိုလ်ကမ္ဘာ vistaဘလော့ကို လျှောက်ငေးလိုက်၊ အပေါ်ဆုံးက ကော်ဖီလေးကို ငုံလိုက်နဲ့ တော်တော်လေး စိတ်ကြည်နူးသွားတယ်။ ကျေးဇူးးး